Fanaraha-maso sy fitsapana - Pandawill Technology Co., Ltd.
Ny kalitao miavaka, ny fahamendrehana ny vokatra ary ny fahombiazan'ny vokatrao dia ilaina mba hampitomboana ny sandan'ny marika sy koa ny anjaranao amin'ny tsena. Pandawill dia manolo-tena tanteraka amin'ny famoahana ny fahombiazana ara-teknika sy ny kalitaon'ny serivisy avo lenta ao anatin'ny fivorian'ny elektronika. Ny tanjonay dia ny manamboatra sy manolotra vokatra tsy misy kilema.
Ny rafi-pitantanana kalitao arahinay andian-dahatsoratra, fizotrany ary fizotran'asa, dia ampahany mitambatra sy manasongadina mafy ny asanay, mahazatra ny mpiasa rehetra ato aminay. Ao amin'ny pandawill, asongadinay ny maha-zava-dehibe ny fanafoanana ny fako, ary ny teknikan'ny famokarana mahia, mamela ny fomba famokarana azo itokisana sy azo antoka kokoa, ary indrindra indrindra.
Fampiharana ny fanamarinana ISO9001: 2008 sy ISO14001: 2004, manolo-tena izahay hitazona sy hanatsara ny asanay mifanaraka amin'ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny indostria.
Ao amin'ny pandawill, mampihatra ambaratonga fanaraha-maso marobe amin'ireo vokatra mivoaka izahay. Manomboka amin'ny fitaovana miditra ary miafara amin'ny fonosana ny vokatra farany. Izahay dia nametraka fanaraha-maso pirinty fanontam-pirinty, fametrahana apetraka, Prereflow, fizotran'ny fizahana lahatsoratra voalohany ary fanaraha-maso optika mandeha ho azy. (AOI) Avy eo izy ireo dia jerena ao ambanin'ny mikraoskaopy alohan'ny hifindrany amin'ny dingana manaraka. ary farany miafara amin'ny departemantan'ny fanaraha-maso kalitao izay ananantsika traikefa an-taonany maro ary ireo mpanara-maso QC mahay indrindra ihany.
Fanaraha-maso sy fitsapana ao anatin'izany:
✓ Fitsapana fototra momba ny kalitao: fizahana maso.
✓ Fanaraha-maso X-ray: fitsapana ho an'ny BGA, QFN ary PCB miboridana.
✓ Fanamarinana AOI: fitsapana ho an'ny paty solder, singa 0201, singa tsy hita ary polarity.
✓ Fitsapana ao anaty faritra: fitsapana mahomby ho an'ny kilema fivondronana sy singa maromaro.
✓ Fitsapana mandeha: arakaraka ny fomba fizahan-toetra ny mpanjifa.